Sida loo sameeyo ICO ah ee Switzerland - Blockchain News
Waxaan bartay shirkadda sharciga Swiss Goldblum iyo Partners, adeegaya qabanqaaba ICO, sida ugu wanaagsan ee ah in ay iskaashi la maal Yurub iyo abaabulo calaamo ee Switzerland.
Maxaad dad badan oo ka fikir haya ICO ah ee Switzerland
In qaybtan waa baad u taagtaa – Ethereum Foundation, Tezos, bixinta, Lykke sameeyey Switzerland caanka ah ee bulshada crypto, iyo Zug waa meel aad u fiican in ay diiwaan shirkadda sababta oo ah nolasha ee maamulka iyo canshuuraha.
Maamulka magaalada ayaa aqbalay bitcoins sida lacagta canshuurta ilaa 200 faran. Diiwaangelinta shirkadda sidoo kale loo samayn karaa iyada oo hordhaca ah ee BTC magaalada idman; Maamulka canshuurta u aragto crypto-lacagaha sida hantida iyo si habboon khuseysaa canshuurta.
Kormeerka, hawlaha nidaminayo, ee looga baahan yahay inuu agaasimaha degaanka ah waa kuwa si wadajir ah mas'uul ka ah shaqo ee shirkadda ama fund, dhigi Switzerland lagu kalsoonaan karo ee maalgashadayaasha, la fahmi karo in qabanqaaba ICO iyo niyad scammers.
Marka marxaladdan hore, waxaan ku talinaynaa in qabanqaaba ICO ee raadiyo shurako Eebe oo maal karaa xaddi weyn oo lacag. Intaa waxaa dheer, aad u baahan tahay si ay u qabtaan Juurille fikradaha, abuuro qorshe lagu mashruuca ah in qayb ka mid ah White Paper noqon doonaa, iyo horumarinta marka la eego kor loogu qaado ururinta lacagaha qaab Shuruudaha iyo Xaaladaha, iyo sidoo kale hubiyo macluumaadka ee qalabka kor uqaadida iyo soo bandhigidda for waafaqsanaanta.
Waxaa jira itimaalka sare ah loo helo Maal ah ee geedi socodka of-ka loo yaqaan iyo carwooyinka ay ku, kaas oo ku lug leedahay dirista soo jeedinta ee shirka a, haysta bandhig, maal-jawaabay’ su'aalo iyo, iyada oo sababtu tahay, hesho lacagaha. Tani waa hal dhibic muhiim ah in shaqada – ka jawaab su'aalaha ugu adag, waji ka waji, halkaas oo su'aasha ma magaciisa waxaa la socda.
By heshiis la qaabiyaasha, marxaladan aanu ku siin karaan qareen daabacid sida taliye mashruuca, iyo sidoo kale ka jawaabo su'aalaha sharciga ah ka macaamiisha ICO.
Ka dib markii maal waaweyn waxaa laga helaa, waxaan ku talinaynaa in laga bilaabo diiwaangelinta ee shirkadda: analoogga ah LLC la fund sharci ah 20,000 faran, CJSC – 100,000 faran. In kiiska labaad, dhammaan saamileyda yihiin si qarsoodi ah. Waxa kale oo suuragal in la iibsado shirkad diyaar-dhigay. In isku midka ah, codsi rasmi ah laga sameeyey, waayo, baahida loo qabo in Oggolaanshaha jaangooyaha ah, furitaanka xisaab in bangiyada iyo abaabulka soo dhaweynta ah ee lacagaha ka maal-yar.
Dhammaan dakhliga helay marxaladaha kuwanu waa qasab ku ah canshuur dhamaadka muddada warbixintan, mana jiraan kala duwan shaqada ee xafiiska canshuuraha ee dalalka kale.
waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro sanduuq loogu talagalay ICO ee Switzerland ?
Sida caadiga ah, lacag ka jira ururo wadareed isticmaala darsaday ama deeqaha barnaamijyada qaarkood in aan la xiriira hawlaha ganacsiga iyo aan ka faa'iidaysan hawshani.
Mar labaad: fund ah ma tilmaamayso waxqabad kasta oo ganacsi, hesho lacagaha maalgeliyeyaasha iyo dib bixinta la Ajir.
Sheekada la TEZOS, qaabiyaasha kuwaas oo aan helin wax sharaxaad ka hesho qareennada ee Switzerland oo lacag aqbalay ka maal-ee foomka of deeqaha, ula kac ah ama aan – waa in la caddeeyo in dhowr tijaabooyin, si cad u muujinaya baahida loo qabo in ku lug qareen dhamaan marxaladaha labada dhinac. U dir ka xirfadlayaasha cidda ka masuulka ah talooyin ama falalka ay noqon kartaa.
Post Next:Produce ee chips ASIC ka Samsung